कोरोना बीमा : गल्ती गरिएछ, यसबाट ठूलो पाठ सिकियो ! | Ratopati
महामारी बिमाको ‘टेष्टिङ्ग पिरियड’ फेजआउट, राज्यमाथि थपियो साढे ७ अर्बको आर्थिक भार
personप्रयास श्रेष्ठ exploreकाठमाडौं access_timeसाउन ६, २०७८ chat_bubble_outline0
महाविपत्ति बीमा योजना अन्तर्गतको कोरोना बीमा कार्यक्रमको समय सीमा सकिएको छ । गत वर्ष २०७७ सालको जेठ महिनादेखि लागू गरिएको सो बीमा कार्यक्रमको ‘टेष्टिङ्ग पिरियड’ अर्थात् परीक्षण अवधि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ लागेसँगै समाप्त भएको हो । तर, उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत स्वास्थ्य बीमा गराएका करिब ७० हजार माथिका सर्वसाधारण बीमितहरुले हालसम्म पनि बीमा बापतको दाबी भुक्तानी पाएका छैनन् । उल्टो सो बापत करिब साढे ७ अर्ब माथिको आर्थिक भार राज्य माथि थपिन पुगेको छ ।
बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवालले भने, ‘जति छिटो सरकारले रकम निकासा गर्छ, त्यति नै छिटो सर्वसाधारण बीमितहरुले भुक्तानी पाउने हुन् ।’
त्यसो त ‘कोरोना बीमा मापदण्ड, २०७७’ अनुसार साढे ३ अर्ब माथिको बीमा दाबी भुक्तानीको दायित्व सरकारकै हो ।
कोरोना बीमा मापदण्ड, २०७७ मा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ, १ अर्ब रुपैयाँसम्मको भुक्तानी बीमक अर्थात् बीमा कम्पनी आफैले व्यहोर्नुपर्ने छ । भने, १ अर्ब भन्दा माथि २ अर्ब सम्म नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले, २ अर्ब भन्दा माथि साढे २ अर्ब सम्म बीमकको महाविपत्ति पुल हेर्ने सामूहिक बीमा कोषले, साढे २ अर्बदेखि साढे ३ अर्ब सम्म नियामक निकाय बीमा समितिले र सो भन्दा माथि साढे ३ अर्ब माथिको सबै जोखिम सरकार स्वयंले व्यहोर्ने छ भनिएको छ । तर, हालसम्म बीमक संस्था (कम्पनी), बीमकहरुको महाविपत्ति हेर्ने पुल र बीमा समिति मार्फत हेर्ने वा व्यहोर्ने ३ अर्ब ५० लाख बाहेक अरू भुक्तानी हुन सकेको छैन ।
के असफल महाविपत्ति कोरोना बीमा कार्यक्रम गलपासो भएकै हो त ?
‘कोरोना बीमा कार्यक्रम निजी क्षेत्रको मात्र कार्यक्रम थिएन, यसमा सरकारको समेत पूर्ण साथ र सर्पोट रहेको थियो । जुन सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेट मार्फत नै बीमा सम्बन्धी गरेको व्यवस्थालाई लिन सकिन्छ ।’
कोरोना बीमा कार्यक्रम नै उचित थियो कि अनुचित भन्ने सवालमा समितिका निवर्तमान अध्यक्ष चापागाईंले रातोपाटीसँग भने, ‘यतिखेर कोरोना बीमा कार्यक्रम ठिक कि बेठीक भन्ने तिर नजाउँ, जो भो सो भो भैनैसक्यो । यसमा तत्कालीन समयमा बीमा समितिको अध्यक्षको नाताले मैले पहल कदमी लिएकै हौँ । तर, पछि जुन रूपमा कोरोना भाइरसको तीव्र सङ्क्रमण बढ्दै गयो तब बीमा गर्नेहरूको समेत सङ्ख्या ह्वातै बढेर गएपछि अब सकिँदैन भनेर हामीले उक्त कार्यक्रम बन्द गर्न खोजेकै हौँ । तर, सरकारले नै राज्यले उठाएको कार्यक्रमलाई बीचमै रोक्न नमिल्ने भन्दै नरोक्न निर्देशन भयो । यसका लागि सरकारले हामीसँगको कुनै संवाद गरेको होइन । लौन त भनेर हामी यो कार्यक्रमलाई एक वर्षसम्म निरन्तरता दिएका हौँ’ उनले भने, नत्र त पहिले नै हामीले यो कार्यक्रम रोक्न खोजेका हौँ । कुनै पोलिसी ठिक लागेन र उचित हुने देखिएन भने फिर्ता हुन पाइन्छ ।’
चापागाईंका अनुसार बीमा समितिले पहिला कोरोना सङ्क्रमणको दर यहीँ अनुपातमा बढ्ला र दायित्व बढ्ला भन्ने सोचेकै थिएन । केही सङ्क्रमित भइहालेमा पनि सरकार आफैले आइसोलेसन, क्वारिन्टिन तथा उपचारको व्यवस्था गर्ला भन्ने थियो । तर, त्यो सम्भव भएन । तर, सङ्क्रमणको दर ह्वातै बढ्यो र बिमाको दायित्व समेत उच्च विन्दुमा पुग्यो । यद्यपि, समिति बीमा कार्यक्रमबाट पछि हट्न नचाहेको होइन । तर राज्यले त्यसको दायित्व काँध थाप्ने भए पनि एक वर्षसम्म कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको हो ।
तर हालका बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवाल महाविपत्ति कोरोना महामारीको बीमा कार्यक्रम ल्याइनु गल्ती भएको बताउँछन् । तत्कालका लागि महामारीको नजरअन्दाज गर्दै कोरोना बीमा जस्ता कार्यक्रम ल्याइनु आफैमा आत्मघाती भएको बताउँदै उनले यसबाट ठूलो पाठ सिकिएको बताए ।
‘कोरोना महामारी जस्तो महाविपत्तिलाई हल्का ठानेर बीमा कार्यक्रम ल्याइनु हुँदैनथ्यो । हामीबाट गल्ती भएकै हो । यस्तो कार्यक्रम अर्थात् महामारीको बीमा कार्यक्रम विश्वका कुनै पनि देशमा गर्ने गरिँदैन । तर नेपालमा गरियो । यसले ठूलो पाठ सिकाएको छ’ सिलवालले रातोपाटीसँग भने ।